बक्सि News समाचार झगडा पूर्वावलोकन | बक्सि Results परिणाम | साक्षात्कार
क्यानाडाबाट ओस्कर रिभास बनाम रायन रोजिकी ब्रिजरवेट कार्ड वजन
सूफी अहमद Rankin-Lindberg कार्ड, नोभेम्बर5मा माइकल गोमेज जूनियर सामना
इटालियन च्याम्पियन मारिया सेचीले नोभेम्बर ५ मा बेक कोनोलीको सामना गर्नेछन्
चार तौल विश्व च्याम्पियन डोनी Nietes Probellum संग हस्ताक्षर
रीस मोल्ड हेडलाइन्स र बब Ajisafe वीआईपी मुक्केबाजी लीड्स शो मा फिर्ता
जोस सोटोले डब्ल्युबीए फेडेन्सेन्ट्रो बेल्टका लागि गनिगन लोपेजको सामना गर्दैछन्
-6-० लाइट हेवीवेट अली Izmailov अमेरिकी डेब्यु मा जेम्स Ballard लाई हरायो
Canelo Alvarez बनाम कालेब संयंत्र - भर्चुअल कसरत उद्धरण र फोटो
Teofimo र Kambosos नोभेम्बर २27 मा म्याडिसन स्क्वायर गार्डन मा लड्न को लागी सेट
डिलियन व्हाइट बनाम ओटो वालिन अक्टूबर ३० को मुकाबला - Whyte घाइते अपडेटेड
Jaron Ennis बनाम थॉमस Dulorme: Jaron Ennis प्रशिक्षण शिविर नोट्स
ओस्कर रिवास बनाम रयान Rozicki - पहिलो Bridgerweight विश्व शीर्षक यो शुक्रवार
कोलम्बियाको ब्यारनक्विलामा डेवेन बीमोनले यो शुक्रबार जोसे फरफानको सामना गरे
जुलियो सीजर मार्टिनेज McWilliams Arroyo सामना - Nov.19 को लागी पुनः निर्धारित
Eros Correa प्रशिक्षण शिविर ओन्टारियो मा यो शुक्रवार को अगाडि उद्धरण
WBA Yordenis Ugas Eimantas Stanionis बाईपास गर्न अनुमति दिन अनुरोध अस्वीकार
यस दिन: लेरोय हेलीले जुआन जोसे गिमेनेजको बिरूद्ध आफ्नो विश्व शीर्षकको रक्षा गरे
रोली Lambert Fogoum जोन Napari दुबई मा यस शनिवार को सामना - पूर्वावलोकन
स्प्लिट-टी को सान्टिलन, मार्टिनेज, Mireles र Madera सप्ताहन्त मा जीत
प्रिन्स अक्टोपस Dzanie #11 मा IBF Bantamweight रैंकिंग मा जान्छ
हाम्रो नयाँ सदस्यता लिनुहोस् YouTube च्यानल लडाई भविष्यवाणीहरु, बक्सर साक्षात्कार र नवीनतम बक्सिंग समाचार र परिणाम, गपशप र दुनिया भर बाट जानकारी संग। केवल तल छवि वा हाम्रो सबै सामाजिक मिडिया को लागी छविहरु को कुनै पनि क्लिक गर्नुहोस्:
भर्खरका बक्सिंग समाचार र परिणामहरू
नवीनतम बक्सिंग समाचार, बक्सि results परिणाम, लडाकू साक्षात्कार र लडाई भविष्यवाणीहरु। हामी एक नवीनतम बक्सि news समाचार र नतिजाहरु को प्रतिक्रिया गर्न को लागी छिटो छौं र हामी तपाइँ यूके, जर्मनी, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका बाट भर्खरको बक्सि results परिणाम ल्याउनुहुन्छ। .worldwide!
१०104 भाषाहरूमा विश्वव्यापी बक्सिंग समाचारहरू
संसारको नवीनतम मुक्केबाजी समाचार र १०४ भाषाहरु मा मुक्केबाजी परिणाम। हामी पेशेवर मुक्केबाजी, शौकिया मुक्केबाजी, पुरुष र महिला मुक्केबाजी कभर। हाम्रो दैनिक अपडेट गरिएको यूट्यूब च्यानल तपाइँ लडाई पूर्वावलोकन र साक्षात्कार सहित दुनिया भर बाट सबै नवीनतम जानकारी ल्याउन मा शुरू भएको छ।
बक्सिंग परिणाम संसार भर बाट
तपाईंको स्क्रिनको तल बायाँपट्टि झण्डाबाट सहि भाषा मात्र चयन गर्नुहोस्।
Boxen247.com अब YouTube मा
जुलाई २ 24 देखि शुरू गर्दै, Boxen247.com का YouTube मा दैनिक भिडियो अपडेटहरू हुनेछ - सदस्यता लिन तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
Dina Thorslund - WBO सुपर Bantamight चैम्पियन
हामी पनि महिला बक्सि fully लाई पूर्ण रूपमा कभर गर्दछौं!
हाम्रो समाचार र परिणामहरू दिनभरि अपडेट हुन्छन्, हप्ताको सात दिन। मिनेट हामी परिणाम देख्छौं हामी बक्सिंग खेल मा धेरै जानकारी स will्कलन गर्नेछौं त्यसपछि हामी यसमा रिपोर्ट गर्न सक्दछौं (यदि हामी व्यक्तिगत रूपमा छैनौं भने)।
हामी ब्राजिलको मध्यमा पसिना बक्सि hall हल कार्यक्रममा ठूलो महत्त्व राख्ने चरणहरूको भव्यतामा म्याचहरूको बारेमा रिपोर्ट गर्नेछौं। हामी पर्वाह गर्दैनौं, हामी बक्सिंगको खेललाई प्रेम गर्छौं! यो
आर्टुर बेटरबिभ - डब्ल्यूबीओ लाइट हेवीवेट चैम्पियन
१ Joh's० को दशकको विनाशकारी माइक टायसनको जैक जोनसनको शुरुआती दिनहरूदेखि हाम्रो प्रेम रहँदै आएको छ। हामी सबै झगडा अपलोड गर्ने छौं जुन खेललाई आज आकार दिईरहेको छ जुन बक्सि fan प्रशंसकलाई दिँदै छ, उत्तम जानकारी यो कट्टर बक्सिंग प्रशंसकको लागि क्याजुअल फाइट प्रशंसकको लागि हो कि छैन भनेर।
प्रत्यक्ष बक्सिing परिणामहरू तिनीहरू हुन्छन्
हामी प्रयास गर्दछौं र LIVE बक्सि results परिणामहरूको साथ मुख्य लडाईहरू कभर गर्दछौं जसरी ती हुन्छन्। हामी कभर अर्को बक्सिंग फाइट कार्डबाट हामी प्रत्यक्ष राउन्ड-राउन्ड अनधिकृत स्कोरकार्डहरू थप्नेछौं।
जर्ज फोरम्यान - दुई समय हेवीवेट चैम्पियन
लाइभ यूट्यूब "फाइट नाइट्स" चाँडै नै सुरू हुँदैछ जहाँ फोन-इन्ससँग छलफलको साथ लाइभ बिग फाइभल लाइभ कमेन्टरी हुन्छ र छलफलहरू प्रत्येक लडाई अघि र पछि हुने छ तिनीहरू लिन्छन्। हामी साँझ भंग गर्नेछौं र तपाईंलाई प्रशंसकहरू संलग्न गराउनेछौं।
हामी सँधै यहाँ र सोशल मिडियामा पोष्ट गर्नेछौं जुन झगडा हुने गर्छ र यस वेबसाइटमा छिट्टै एउटा सूची राख्दछ।
कभर गरिएको बक्सिंग घटनाहरूको सूचीको लागि, तलका लिंक क्लिक गर्नुहोस्> प्रत्यक्ष बक्सिंग परिणाम र घटनाहरू <
बक्सिंग पत्रकारिता मा लाग्छ कहिल्यै?
हामी के प्रस्ताव गर्छौं तपाईको पत्रकारिता प्रतिभा प्रमाणित गर्ने प्लेटफर्म हो कम्पनीहरू हुन सक्छ जुन तपाईंलाई सशुल्क बक्सि contrib योगदानकर्ताको रूपमा लिन सक्दछ।
Boxen247.com को एक विश्वव्यापी पढ्ने दर्शक छ जुन हाम्रो बक्सिंग लेखहरू, समाचारहरू र परिणामहरू पढ्छन् र हामी सम्भाव्य रूपमा तपाइँको लेखहरू हाम्रो वेबसाइटमा प्रस्तुत गर्दछौं।
त्यहाँ छन् NO Boxen247.com बाट सीधा हमारे अतिथि लेखकहरूलाई आर्थिक भुक्तान तर हरेक लेखको साथ तपाईंको नाम र ईमेल ठेगाना, ट्विटर ह्यान्डल आदि पोस्ट / लेखमा थपिनेछ।
तपाइँका लेखहरू अद्वितीय र मूल हुनु पर्छ र कुनै अन्य साइटबाट लिइएको छैन (हामी सबैलाई कॉपिस्केप मार्फत चोरीको लागि लेख गर्दछौं), पूर्ण साक्षर हुनुपर्दछ र हिज्जेको लागि जाँच गरिनुपर्दछ र जसो पनि बक्स वा न त हाम्रा पाठकहरूको पक्षमा आपत्तिजनक मानिन्छ।
यो उदाहरणको लागि ऐतिहासिक वा हालको बक्सिंग लेख हुन सक्छ, समाचार सम्बन्धित, परिणाम सम्बन्धित ... बक्सिंग संग शाब्दिक केहि पनि जडित। तपाईलाई कुनै पनि सामाजिक मिडिया लिंकहरू मार्फत तपाइँको लेखमा सिधा पाठकहरू ड्राइभ गर्न स्वागत छ। सबै लेखहरू कुनै तथ्या .्क वा ऐतिहासिक शुद्धताको साथ सहि हुनुपर्दछ र तदनुसार जाँच गरिनेछ।
यदि चासो छ भने, कृपया ईमेल गर्नुहोस् boxen247@gmail.com
हामी आंशिक समय होइनौं!
पूर्ण समय स्टाफले तपाईलाई भर्खरको बक्सिंग समाचार र बक्सिंग परिणामहरू बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्वव्यापी रूपमा ल्याउँदछ, यो हाम्रो जुनसका साथै तपाईंको हो। लडाई खेल को एक प्रशंसक को रूप मा, तपाईं को संग लडिरहेको छ को थाहा मा राख्न चाहानुहुन्छ, जब तिनीहरू लडिरहेका छन् र लडाई को जिते। हामी पूरा लडाई कार्डमा खाली ठाउँ छोड्ने प्रयास गर्दैनौं जब हामी सक्दछौं (केवल 'मुख्य' लडाकूहरू मात्र होइन)।
मुहम्मद अली - तीन समय हेवीवेट चैम्पियन
हामी भर्खरको बक्सिंग समाचार, भर्खरका बक्सिंग परिणामहरू, गफ र घोषणाहरूप्रति प्रतिक्रिया दिन इन्टरनेटमा छिटो हो। हाम्रो साइटमा हुँदा, पछिल्लो सामग्रीको बारे निश्चित हुन प्रत्येक पृष्ठलाई 'रिफ्रेस' गर्नुहोस्।
हाम्रो वेबसाइट लगातार दिनभरि अपडेट गरिन्छ (हामी भाग टाइमरहरू होइनौं)। हामी तपाईंलाई भर्खरका बक्सिंग परिणामहरू, समाचार र गफ ल्याउने प्रयास गर्दछौं जुन हार्डकोर बक्सिंग प्रशंसक र आकस्मिक लडाई फ्यानलाई अपील गर्दछ। समाचार र नतीजाहरू केवल यूके, अमेरिका वा देश विशेष होइनन्, यो विश्वव्यापी बक्सिंग हो जुन तपाईले देख्नुहुनेछ।
सबै समय शीर्ष १० बक्सरहरू
Oleksandr Usyk - अपराजित पूर्व क्रूजरवेट च्याम्पियन र वर्तमान हेवीवेट कन्डिटर
हाल लेखिएको छ (P4P, हेवीवेट र क्रुजरवेट सम्पन्न), यस सेक्सनमा तपाईले boxen247.com को शीर्ष दश बक्सर्सहरू प्रत्येक वजनमा पाउनुहुनेछ।
यो सबै व्यक्तिपरक हो र हाम्रो दृश्य मात्र हो कि कसरी य्याटेरियरका बक्सहरू एक अर्कासँग निष्पक्ष हुन्छन्।
Boxen247.com सोशल मिडियामा
हामीलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर र पिनटेरेस्टमा पछ्याउन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। हामी धेरै सामाजिक छौं र हामी अपडेट गर्दछौं र अपलोड गर्ने क्रममा हामी प्रत्येक एकल लडाई परिणाम वा भर्खरका बक्सिंग समाचार पोस्ट र ट्वीट गर्दछौं Boxen247.com। हामी लडाई प्रशंसकहरुलाई अप-टु-डेट राख्न मद्दत गर्न चाहन्छौं मुक्केबाजहरूबाट सबै झगडा गफका साथ र लडाई खेल भित्र विश्वव्यापी रूपमा गरिएको हरेक घोषणा।
हामी फेसबुकमा बोनस तस्वीरहरू र लडाई फुटेज पोष्ट गर्दछौं। हामीलाई लडाईँ को संसारमा के भइरहेको छ थाहा छ राख्नका लागि हामीलाई एउटा थम्ब्स अप (केवल फेसबुक छवि क्लिक गर्नुहोस्) दिनुहोस्।
कानूनी अस्वीकरण: boxen247.com बाट सबै विचार र टिप्पणीहरू निष्पक्ष छन् र छलफल गरिएको बिषयमा पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो। यस वेबसाइट कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी वा संस्था युके वा विश्वव्यापी रूपमा सम्बद्ध छैन।